Maxaa kallifay in dadka guryahooda uga qaxaan si aan horey loogu arag? - Jigjiga Online
HomeWararka MaantaMaxaa kallifay in dadka guryahooda uga qaxaan si aan horey loogu arag?
In ka badan 35,000 oo qof ayaa lagu khasbay inay guryahooda ka barakacaan maalin kasta oo ka mid ahayd sanadkii 2018-kii – labadii ilbiriqsi gudahoodba hal qof ayaa barakacayay – waxayna arrintaas tirada dadka bara kacay ee adduunka gaarsiisay heer aysan waligeed gaarin oo ah 71 malyan oo ruux.
Isku darka 26 malyan oo qof ayaa ka gudbay xuduudaha, 41 malyan oo kalena waxay ku barakaceen gudaha dalalkooda halka 3.5 malyan oo qofna ay raadsadeen magangalyo – tiradaasina waa tii ugu badneyd abid, sida ay sheegtay hayadda qaxootiga u qaabilsan Qaramada Midoobay ee UNHCR.
Xaqiiqdii, tirada dadka barakacayaasha ah ayaa labanlaab noqotay 10-kii sano ee ugu dambeysay, sida ay muujisay qiimeyn ay sameysay UNHCR, iyadoo dagaallada ba’an ee ka jira waddamada Ciraaq iyo Suuriya ay sababeen in qoysas tirobadan ay ka dhex baxaan bulshadooda.
Barakacayaasha gudaha inta badan waxay go’aansadaan inaysan meelo aad u fog u safrin, taasna waxaa loo sababeeyaa labo arrin oo mid ay tahay inaysan dooneyn inay ka fogaadaan guryahooda iyo qoysaskooda, ama tan kale oo ah inaysan heysanin dhaqaale ay xuduudaha uga gudbaan.
Laakiin dad badan oo ka mid ah barakacayaasha gudaha waxay ku xayirmaan deegaanno ay adagtahay inay gaaraan hayadaha gargaarka bixiya – sida meelaha ay dagaallada wali ka socdaan – waxayna markaas wax walba ka sugaan dowladahooda. Mararka qaar dowladahaas qudhooda ayaa sabab u noqda inay dadku barakacaan, ama xitaa sababo la xiriira dagaallada ayey u awoodi waayaan inay muwaadiniintooda amnigooda sugaan ama ay baahidooda daboolaan.
Dhammaan sababahan awgood, Qaramada Midoobay waxay barakacayaasha gudaha ku qeexday “inay ka mid yihiin dadka u nugul weerarrada iyo waxyeellada kaleba ee guud ahaan caalamka”.
Hase ahaatee, dad kale oo marba marka ka dambeysa sii badanaya ayaa guryahooda uga barakacaya sababo la xiriira musiibooyinka dabiiciga ah, oo ay ugu badan yihiin “dhibaatoyinka waaweyn ka dhasha dhinaca cimilada”, sida ay sheegtay hay’adda kormeerta xaaladaha barakacayaasha gudaha ee adduunka.
Tirada ugu yar ee dadka barakacay waa kuwa magangalyo doonka ah – waana kuwa dalalka kale ka codsaday dagannaanshaha balse sababaha ay sheeganayeen aan la aqbalin.
Kuwaas tiradoodu waxay ahayd 3.5 malyan oo qof sanadkii 2018-kii – waxayna 10-kiiba hal ka yaryihiin kuwa lagu khasbay inay barakacaan.
Haddii aan eegno qiyaastii la sameeyay sanadkii lasoo dhaafay oo kaliya, 13.6 malyan oo qof ayaa lagu khasbay inay guryahooda ka qaxaan – intooda badanna waxaa sabab u ahaa dagaallo. Tiradaas waxay ka badan tahay shacabka ku nool magaalada Mumbai, oo ah magaalada ugu dadka badan ee dalka Hindiya.
Kuwii barakacay 2018-kii oo kaliya, 10.8 malyan oo ka mid ah waxay ku dhex firxadeen gudaha dalalkooda – waxayna tiradaas u dhigantaa 4 ka mid ah shantii qof ee barakacdayba.
Ku dhawaad 3 malyan oo ruux ayaa guryahooda ka dhaqaaqay sanadkii lasoo dhaafay gudihiisa – in badan oo ka mid ahna waxay ka cararayeen qalalaase u dhaxeeya maleyshiyo beeleedyo.
“Dhammaan qoyskeyga waxay ku sugan yihiin Venezuela, waxaan ku khasbanaa inaan halkan imaado, oo aan ka shaqeeyo, si aan iyaga u caawiyo”, ayey tiri, walina ma aysan helin wax shaqo ah.
Bidi Bidi, oo mar ahaan jirtay tuulo yar, waxay aad u ballaaratay sanadkii 2016-kii, haddana waxay ku fadhisaa baaxad dhan 250 sq km (97 sq miles) – kaasoo ah saddex meelood meel ka mid ah dhulka ay ku fadhiso magaalada New York City.
Mas’uuliyiinta xeradaas ayaa sidoo kale qorsheynaya inay dhisaan xarumo waxbarasho.
“Marka aad soo gaartid xuduudda, wali waad naxsan tahay, laakiin waxaa kaasoo horreeya dadkan oo diyaar u ah inay kusoo dhaweeyaan”, ayuu yiri.
“Waxaa yaraaday roobabkii di’i jiray sannadihii lasoo dhaafay, taasina waxay adkeysay in wax la beerto”, ayuu yiri.
“Hadda labo jeer oo kaliya ayaa dalag beeran karnaa sanadkii, halkii aan horay ilaa saddex jeer wax u abuuran jirnay”, ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Barakacayaasha ku sugan magaalooyinka intooda badan wuxuu wakhtigooda ku dhammaadaa dhismaha hoy aysan dhameystiri karin, mana heystaan cunto iyo biyo ku filan, arrintaas ayaana ka dhigta kuwo u nugul cudurro, sida ay sheegtay hay’adda kormeerta xaaladda barakacayaasha ee magaceeda loo soo gaabiyo IDMC.